न्युयोर्कलाई उछिनेर बेइजिङ बन्यो संसारकै धेरै अर्बपति बस्ने सहर — Imandarmedia.com
११राष्ट्रपतिले दिएको तक्मामा किन छैन चुच्चे नक्सा ? यस्तो छ खास रहस्य
काठमाडाैं । चिनियाँ राजधानी बेइजिङ संसारकै बढी अर्बपतिहरू बस्ने सहर बनेको छ। फोर्ब्स म्यागजिनले प्रकाशित गरेको संसारका अर्बपतिको सूचीमा परेकामध्ये १ सय जनाल बेइजिङका बासिन्दा छन्। तीमध्ये ३३ जना अर्बपति यसपालिमात्रै थपिएका हुन्।
बेइजिङमा अर्बपतिहरू थपिए पनि न्युयोर्कका अर्बपतिहरूसँग बेइजिङका सबै अर्बपतिको भन्दा ८० अर्ब डलर बढी सम्पत्ति छ। चीनमा (हङकङ र मकाउसमेत) यस वर्ष २ सय १० जना अर्बपति थपिएका छन्। यीमध्ये आधा भन्दा बढीले उत्पादनमूलक र प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीका मालिक हुन्।
चीनकी अर्बपति महिला केइट वाङले इ-सिगरेटबाट पैसा कमाएकी हुन्। अहिले चीनभरि ६९८ जना अर्बपति छन् भने अमेरिका ७२४ जनाको सम्पत्ति १ अर्ब डलरभन्दा बढी छ।
यसपालि फोर्ब्सको सूचीमा ४९३ जना नयाँ अर्बपति थपिएका छन्। अर्थात् गत वर्ष हरेक १७ घन्टामा एक जना मानिस अर्बपति बनेका छन्। भारत धेरै अर्बपति भएको मुलुकमा तेस्रो स्थानमा छ। त्यहाँ १४० जना डलर अर्बपति छन्।
चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीमा खस्ने खतरा,बिस्वभर त्रास
प्रहरी र तस्क’रबीच गो’ली हा’नाहा’न, कम्तीमा २५ जनाको मृ’त्यु
के भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अब ओरालो लाग्न लागेको हो?
बिल गेट्सले डिभोर्स गरेकी श्रीमती मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरे यति धेरै सम्पति र खाेले यस्ताे बेग्लै रहस्य
पूर्वराष्ट्रपतिको घरलाई लक्षित गरी शक्तिशाली ब’म वि’ष्फोट, केछ अवस्था ?
कोरोना संग जीतको दाबी गर्ने भारत सरकार आखिर कसरी फस्यो चंगुलमा ?
सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएपछि श्रमिक आन्दोलित
यी महिलाले एकैपटक जन्माइन् ९ बच्चा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति,
आमा बन्न किन डराइन् चर्चित भारतीय हास्य कलाकार भारती सिंह ? यस्तो छ रहस्य